आरु स्वास्थ्यका लागि कति लाभकारी? - Syangja Serofero
मङ्लबार, माघ ६, २०७७ | Tuesday 19th January 2021
आरु स्वास्थ्यका लागि कति लाभकारी?
स्याङ्जा सेरोफेरो आइतवार, बैशाख २८, २०७७ | May 10, 2020
काठमाडौँ : गर्मीको समयमा पाइने फलहरु मध्ये एक आरु हो । आरु स्वाद र स्वास्थ्य दुवैको लागी निकै फाइदाजनक छ । यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा आउने समस्याहरुलाई समाधान गर्न निकै मद्धत गर्छ । स्वादिलो आरु स्वास्थ्यका लागि पनि लाभकारी छ । स्वस्थ रहन मौसमी फलफूल र तरकारी खानुपर्छ । त्यसैले यदि तपाइको आरु खाने बानी छैन भने गर्मीको समयमा आरु खाने गर्नुहोस ।
आरुले स्वास्थ्यलाई गर्ने फाइदाहरु यस प्रकार छन् :
–मिर्गौला रोगीका लागि पनि आरु गुणकारी छ। यसमा पोटेसियम पाइन्छ। जसले मिर्गौलाबाट फोहोर निकाल्न मद्दत गर्छ। साथै, मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ।
–‘यूएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर’ द्वारा गरिएको एक अनुसन्धानले आरुमा पाइने तत्त्वले क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने बताएको छ।
–आरुमा बिटा क्यारोटिन पाइन्छ। आरु खाँदा हाम्रो शरीरले यस तत्त्वलाई भिटामिन ‘ए’मा परिवर्तन गरिदिन्छ। यो भिटामिन आँखाका लागि फाइदाजनक छ।
–आरुले तौल कम गर्न पनि मद्दत गर्छ । आरुमा रहेको ८० प्रतिशत पानी र फाइबर भरपूर मात्रामा पाइन्छ । यसमा क्यालोरीको मात्रा कम हुन्छ । आरुमा रहेको फाइबरको मात्रा पेट र कलेजोबाट टोक्सिनलाई हटाउँनेमा मद्दत गर्छ ।
–आरुमा आवश्यक ऐन्टीओक्सिडेन्ट्स हुन्छ, जसले वृद्धावस्थाको प्रक्रियासँग लड्न सक्षम रहन्छ । यसमा भिटामिन–सी बढी मात्रामा पाइन्छ, जसले एन्टिओक्सिडेन्टले जस्तै काम गर्छ । यसले रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।
–मधुमेह रोगीका लागि पनि आरु लाभकारी छ। यसमा पाइने तत्त्वले रगतमा चिनीको मात्रालाई कम गर्न मद्दत गर्छ।
–आरुको बोक्रामा पनि केही मात्रामा भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छन् । यसले आँखालाई स्वास्थ्य र दृ्श्य शक्ति बढाउँनका मद्दत गर्छ । आरुमा बीटा क्यारटीन नामक तत्व पाइन्छ, जसले शरीरमा भिटामिन ‘ए’ बन्नका लागि आवश्यक हुन्छ । भिटामिन ‘ए’ले आँखामा रेटिनालाई स्वस्थ्य राख्नमा धेरै मद्दत गर्छ ।
–साथै आरुमा पाइने क्याल्सियम र फस्फोरसले हड्डिलाई बलियो बनाउँनका साथै दाँतलाई पनि बलियो बनाउँछ ।
पिपल्स च्वाइस अवार्ड राष्ट्रिय भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीलाई
बालबालिकाहरुका लागि प्रेन्सा रेग्मीको प्रतिभा प्रस्तुति कार्यक्रम
वालिङ नगरपालिकाको नवौं नगर सभा सम्पन्न,
वालिङ नगरपालिकालाई पन्ध्र लाखको स्वास्थ्य उपकरण प्रदान
राष्ट्रिय एकता दिवसको कार्यक्रम घोषणा गर्दै भारतीयलाई मनिषाको यस्तो जवाफ